लोकमानज्यू कहाँ छ त्यो ‘जनकपुरिया’ र ‘धरानियाँ’को उजुरी – YesKathmandu.com
शुक्रबार ११, बैशाख २०७२
डलरको अवैद्य कारोबारबाट व्यापारी र ग्राहक लाभान्वित हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चुर्लुम्म डुब्छ । योभन्दा पनि गम्भीर हो, अवैध हुण्डीको कारोबार । पैसा कहाँबाट आयो ? कसरी गयो ? सेतो वा कालो, कस्तो पैसा ? यस्ता कुराको अभिलेख हुँदैन ।
कुरा यति गम्भीर छ । तर, अख्तियारबाट यसम्बन्धी एउटा उजुरी कहाँ गायव भयो, पत्तो छैन । कारोबार गर्ने व्यक्ति मारबाडी हुन् । नामको पछाडि ‘जनकपुरिया’ र ‘धरानियाँ’ लेख्ने, तर जीवनमा न जनकपुर देखेको, न धरान नै टकेको । उजुर परेका व्यक्ति हुन्, नवीन अग्रवाल ‘जनकपुरिया’ । रणमुक्तेश्वर बिजिनेशन कम्प्लेक्स (आरबी), खिचापोखरीमा छ यिनको व्यापार–बट्टा । उनी कम्प्युटर, पेनड्राइभ, ल्यापटपका ठूला कारोबारी हुन् । कतिपयले ‘कस्मेटिक किङ’ पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालका सबभन्दा ठूला कम्प्युटर कारोबारीमध्येमा पर्छन् । पसल आरबी कम्प्लेक्सको बीएफ २३२ मा छ । कतिसम्म भने, भारत, राजस्थानका बासिन्दा उनीसँग धनुषा जिल्लाबाटै जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ । पसलमा दुई–चारवटा ल्यापटप र केही कस्मेटिकका सामान देखिन्छ । दिनहुँ करोड घटीको कारोबार हुँदैन । सटरको भाडा ५० हजार भन्दा बढी तिर्छन् । तर, देखिने सामान कत्ति पनि छैन । घर छ, डिल्लीबजारमा । बाबुको नाम शिवकुमार अग्रवाल हो । उनीसँग अझै पनि भारतकै राशनकार्ड छ । भाइ हुन्, तरुण अग्रवाल ‘जनकपुरिया’ । उनले चलाउने फर्मको नाम पनि ‘तरुण’ नै हो । पत्रकारले जनकपुरमा कसलाई चिन्छौ ? भनेर सोध्यो भने कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाको नाम लिन्छन् । जनकपुरमा तिम्रो कति नम्बर वडा ? कुन टोलमा घर छ ? भनेर सोध्यो भने जवाफ छैन । ‘उही कैलाशबाबुको घर नजदिक तो हो’, यस्तो उत्तर दिन्छन् । यस्ता शंकास्पद व्यापारीविरुद्धको उजुरी, दर्ता नम्बरसहित कसरी एकाएक गायव भयो, अख्तियारका कर्मचारी छक्क परेका छन् ।
एएफसी यू १४ गर्ल्स च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
डा. बाबुराम भट्टराई गर्जिए–‘देश टुक्र्याउने खेलमा पहाडीयाहरु लाग्ने अनि मधेसीलाई दोष दिने ?’
लार्परवाही गरे चालकलाई जेल
संविधान निर्माणमा हतार गरे द्धन्द निश्चित